CORONAVIRUS MANERAN-TANY Maneran-tany
6000 ny maty tao anatin’ny iray andro 1 056 000 ny olona voa, ary 56 000 hatramin’ny omaly, izany hoe nisy fitomboana 6000 teo tao anatin’ny 24 ora.
Any Eoropa hatrany no tena mampihazakazaka be indrindra ny isan’ny maty sy marary, na dia i Etazonia aza no voasokajy ho firenena ahitana olona voa be indrindra satria maherin’ny 257 000 no marary any. Tafiakatra 14 681 maty ho an’i Italie izay mitana ny laharana voalohany. Maherin’ny 117 000 ny tranga any an-toerana, ary 30 000 kosa no efa sitrana, tafavoaka velona. 10 935 kosa ny maty ho an’ny laharana faharoa, dia zareo Espaniola, izay tafiakatra 935 ny maty omaly. Any Eoropa ihany dia efa 6507 no maty any Frantsa, ka ny 588 tamin’ireo dia tao anatin’ny 24 ora.
Hiditra an-tsehatra ny mpanjaka Elisabeth II
684 ny maty tao anatin’ny iray andro tany Royaume-Uni, izay mampiakatra ny isan’ny maty rehetra hatrizay ho 3605, raha toa ka 38 168 no olona voamarina fa efa voa. Io 684 io no isa maty betsaka indrindra tao anatin’ny iray andro hatramin’izay na “nouveau record”. Ny alarobia teo dia 563 ary 569 ny alakamisy. Nosokafana omaly moa ny hopitaly lehibe iray ao Londres izay misy fandriana 4000. Raha toa ka nohalavaina noho ny fihibohana ho an’ny Praiminisitra Borris Johnson izay tratry ny Covid-19, dia hiditra an-tsehatra hiteny amin’ny fahita lavitra hitondra hafatra ho an’ny Britanika sy ireo firenena ao anatin’ny Commonwealth ny mpanjakavavy Elisabeth II rahampitso alahady, araka ny fanambarana avy ao amin’ny Lapam-panjakana Buckingham omaly. Io no fidirana an-tsehatra tsy ara-potoana faha-4 ataon’ity mpanjaka ity, izay efa 68 taona nanjakana.
SARY: Elisabeth II
Sekretera jeneralin’ny ONU
“Ho avy ny ratsy kokoa noho izao”
Ho avy ny ratsy kokoa noho izao na hoe: “le pire est encore à venir”, hoy ny Sekretera Jeneralin’ny Firenena Mikambana Antonio Guterres omaly zoma, nanao antso avo manokana sy nampitanrina an’ireo tany mbola misy ady. Isan’ny noresahany manokana I Lybie izay misy ady, kanefa nisy iray voamarina fa matin’ny coronavirus ary, olona no voamarina fa efa voa. Niantso ny hampitsaharana ny ady manerana izao tontolo izao ny tenany mba hamondronana hery hisakanana ny fivoaran’ny Covid-19. “Misy ny vintana sy ny herijika lehibe hisian’ny fandriampahalemana amin’izay, kanefa mbola lavitra izany isika”. Ny filàna izao no maika, ary ny Covid-19 dia efa tonga eo an-tokontanin’ny toerana misy ny ady. Tena ahariharin’ny Covid-19 hoe hatraiza ny hafainganany miditra ao amina tany iray sy hamotika ny firenena sy hanimba ny fiainana ao, hoy io lohany ao amin’ny ONU io, izay mbola nanamafy hatrany an’ilay hoe: “Le pire est encore à venir”!
4100 miliara dolara ny fitotonganana
Nitotongana tanteraka ny sehatra tsy miankina ao anatin’ny faritra Eorpa na ny “zone euro” eo amin’ny tontolon’ny asa, hoy ny Cabinet Markit. Araka ny fanadihadian’ny Banky Asiatika momba ny fampandrosoana, dia mety hahatratra 2000 hatramin’ny 4100 miliara dolara ny tomban’ny krizy ara-toekarena vokatry ny coronavirus, izay manome 2,3 hatramin’ny 4,8% amin’ny harin-karena faobe na ny PIB maneran-tany. Tsy mbola tafiditra ao anatin’izany ny krizy ara-tsosialy sy ara-bola goavana, ary indrindra ny voka-dratsy mety haharitra eo lafiny ara-pahasalamana sy ara-panabeazana. Ho an’ny Kaominisionina Eoropeanina, dia nisy ny soso-kevitra hanokanana drafi-panarenam-pirenena sy iraisam-pirenena ka hanaovana tohana ho an’ny tontolon’ny asa mitentina 100 miliara dolara.
Gadra 6266 navoaka
Gadra 6266 no navoaka ny fonja tany Frantsa teo anelanelan’ny 16 martsa sy ny 01 aprily, araka ny fanambaran’ny Minisiteran’ny fitsarana any an-toerana omaly. Antony ny fampihenana ny fivangongoana ao am-ponja hisorohana ny fipariahan’ny coronavirus. Ny 01 aprily dia 66 309 ny olona tazonina amin’ireo fonja 188 manerana an’I Frantsa raha toa ka 72 575 izany tany amin’ny 16 martsa. Somary nihena rahateo ny asam-pitsarana izay nampihena ny olona vaovao tazonina am-ponja, ary teo ihany koa ny fanafahana mialohan’ny fotoana. Mahatratra 6507 ny isan’ny maty tany Frantsa hatramin’ny omaly. Ny any Frantsa dia io ny fepetra, fa manao ny fitakiana tahaka izany dia ny hampihenana ireo marefo, beantitra,… ao am-ponja amin’i Madagasikara ihany koa ny Amnesty International.
Hery fiarovan’ireo sitrana hatsindrona amin’ny marary
Efa nanomboka ny fiandohan’ny herinandro teo ny nanaovana ity andrana ity, ary andrasana ny valin’ny mety ho fahombiazany na tsia. Ao amin’ny hopitaly Saint-Antoine any Parisy ampian’ny EFS (Etablissement Français de Sang) no hanaovana azy. Raisina ny hery fiarovana na “anticorps” an’ireo olona efa sitrana naharesy ny coronavirus ary hatsindrona amin’ireo marary. “covid plasma” no iantsoana ity fandalinana ara-pitsaboana na “etude clinique” ity. Manao fanentanana amin’ny Frantsay mba tsy hikely soroka amin’ny fanomezan-dra moa ny EFS any Frantsa amin’izao.